Inkqubo yokupholisa ukufudumeza inkqubo yokuphononongwa kwePD
Uphengululo lweeTekhnoloji zoNgenelelo lweNdalo
Zonke i-IH (Ukufudumeza Iinkqubo zenziwe zenziwa kusetyenziswa i-electromagnetic induction eyaqala ukufunyanwa nguMichael Faraday ngonyaka we-1831. Ukufakelwa kombane ukufakela umbane kubhekisa kwisimo apho umbane uveliswa ngokujikeleza ngokuvalwa kwesantya sangoku kwisinye isekethe ebekwe ecaleni kwaso. Umgaqo osisiseko wokufudumeza induction, oku kuyindlela esetyenzisiweyo yokufumanisa kukaFadaday, yinto yokuba i-AC ehamba ngokujikeleza kwisiphaluka ichaphazela ukuhamba kwemagnethi yesekethe yesibini ekufuphi nayo. Ukuguquguquka okwenzeka ngaphakathi ngaphakathi kwisiphaluka esiyintloko kunikeze impendulo yokuba kwenzeka njani ngokungaqondakaliyo okwenzeka kwisekethe yesibini ejongene nayo. Ukufunyanwa kukaFaraday kukhokelele kuphuhliso lweemoto zombane, iijenreyitha, iiguquli, kunye nezixhobo zonxibelelwano ngaphandle kwamacingo. Ukusetyenziswa kwayo, nangona kunjalo, akubanga naziphoso. Ukuphulukana nobushushu, okwenzeka ngexesha Inkqubo yokupholisa ukufudumeza, yayintloko enkulu yokujongela phantsi ukusebenza kwenkqubo. Abaphandi bafune ukunciphisa ubushushu ngokudambisa isakhelo somazibuthe esibekwe ngaphakathi kwimoto okanye kwisiguquli. Umthetho kaFadaday walandelwa luthotho lwezinto ezifumanise phambili ezinje ngoMthetho kaLentz. Lo mthetho ucacisa inyani yokuba i-induction yangoku ihamba ngokunqamlezayo ukuya kwicala lotshintsho kwi-induction magnetic intshukumo.
Ukulahleka kobushushu, okwenzeka kwinkqubo yokufakwa kwe-electromagnetic, kungaguqulwa kube yimveliso yobushushu yamandla ombane inkqubo yokufudumala ngokusebenzisa lo mthetho. Amashishini amaninzi aye axhamla kolu phuculo lutsha ngokumilisela ukufudumeza ngokungeniswa, ukulungiselela ukucinywa, kunye nokudityaniswa. Kwezi zicelo, ukufudumeza ngokungenisa kwenziwe ukuba kube lula ukuseta iiparameter zokufudumeza ngaphandle kwesidingo sombane wamandla ongezelelweyo. Oku kunciphisa kakhulu ukulahleka kobushushu ngelixa kugcinwa indawo efanelekileyo yokusebenza. Ukungabikho konxibelelwano lwezixhobo zokufudumeza kuthintela iingozi ezingathandekiyo zombane. Uxinano lwamandla aphezulu lufezekiswa ngokuvelisa amandla obushushu awaneleyo ngexeshana elifutshane noko ……
iindidi Ukufudumeza Ukufudumeza kwePDF tags Ukufudumeza frequency pdf, i-heater ye-induction pdf, isixhobo sokufudumeza sendalo pdf, izixhobo zokufudumeza induction, umatshini oshushu wokufudumeza pdf, ukufudumeza kwento, i-induction heating Power pdf, Inkqubo yendlela yokufudumeza i-pdf, itekhnoloji yokufudumeza induction, i-pdf yokufudumeza Post yokukhangela